Ngokuvamile idatha kwimemori khadi ayasuswa nemiyalezo ngokucindezela "Susa Konke" noma ukufometha yayo. Uma ususe ngephutha i-data esuka imemori khadi, ikhadi le-SD, njengomculo nezithombe eyigugu futhi ukululama kubo, lesi sihloko uzokutshela indlela yokukwenza.
amakhamera yesimanje kakhulu digital, kuhlanganise onobuhle ezivamile ezivela abakhiqizi ezifana Nikon, Canon kanye Olympus, kusetshenziselwe ukuqopha izithombe SD inkumbulo Kufakiwe ikhadi. Ngisho noma ngamabomu noma ngephutha ususiwe idatha kusuka Kufakiwe SD, ifomethi ke, izithombe zakho ukususwa isesekhona kwimemori khadi, isikhala lapho salotshwa, kumakwe njengokwenziwe mahhala okufakiwe okwalandela. Ezimweni eziningi, lezi zithombe kungenziwa zibuyiswe.
Ngemva ukususwa izithombe kufanele uyeke ukusebenzisa ikhadi ekuqongeleleni idatha entsha. Uma uqhubeka ukudubula ekhadini efanayo, izithombe ezintsha izocishwa esizeni endala, owawuzokwenza yokutakula kungenzeki, noma kakhulu ukunciphisa amathuba okuthi hleze bebuyile. Uma emva zokugcina idatha ukususwa, uqala kabusha mayigcwalise kumephu, bese lesi sihloko ngeke ukusiza, ngeshwa ulahlekelwe izithombe zakho kuze kube phakade.
Phinda izithombe kanye nenye idatha ku-SD Card isitoreji medium kungaba isofthiwe alulame idatha efana Stellar isithombe yokutakula. Isekela SD Card ngaphezu izinhlobo cishe yonke ezidumile amakhadi inkumbulo: flash Card, XD Isithombe Card, i-Memory Stick, ikhadi MMC, njll, futhi liyakwazi alulame isithombe amafayela ngefomethi RAW ngokuba ethandwa kakhulu digital ikhamera lemikhiqizo ezifana Sony, Nikon , Canon, Samsung, Pentax, Minolta, Kodak, Sigma, Fuji, Olympus, Epson, Panasonic Mamiya, njll Asekelwe nezakhiwo RAW amakhamera: Nikon (NEF, NRW), Canon (CR2, CRW), Olympus (ORF), i-Sony (SR2, ARW, SRF), Kodak (K25, KDC, DCR), Fuji (RAF), Minolta (MRW ), Pentax (PEF), Sigma (X3F), Epson (ISIZA), DNG, Panasonic (RAW), Mamiya (MEF, Mos). Asekelwe isithombe amafomethi image: JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP, JP2, INDD, PSD, Paint Isitolo Pro Image yefayela (PSP), Mamiya (Mos), Isithombe Ifayela (PCT). Asekelwe ifomethi yomsindo: WAV, MP3, AIFF, le RPS, le MIDI, m4a, M4P, AU, Ogg, WMA, RM, Real Audio (i-RA).
Yokutakula Software idatha yesithombe Stellar yokutakula kusivivinyo imodi sibonisa ukuthi iyiphi amafayela kungenziwa zibuyiswe nge izithonjana izithombe ukuyithola. Ngaphandle izithombe, kungaba ukubuyisela amafayela omculo namavidyo. Uhlelo uyakwazi ukubuyisela amafayela soxhumanoningi kusuka ezahlukene kwisitoreji semidiya: angaphandle kanzima, CD kanye DVD amadiski, USB flash oshayelayo khadi. Lolu hlelo lusebenza ngaphansi ukulawula tekusebenta -Windows noma i-Mac izinhlelo. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe Isofthiwe $ 39.
Ukuze ukuhlola uhlelo, mina naschelkat izithombe Canon ikhamera bese ngempela "ngephutha" uwasuse. Uma efakwe uhlelo lwethu lwe-isimangaliso kwikhompyutha siqu ne uhlelo lokusebenza lwe-Windows 7, wanquma ukulicubungula e ukubuyiselwa izithombe ezithwetshulwe. Imiphumela empeleni enhle kakhulu. Uhlelo wakwazi ukuthola futhi ubuyise eziningi izithombe. Ngaphezu kude manje ukuthi ngithole kwimemori khadi ezinye izithombe kudala, ukuba khona lapho ngangikhohlwe. Zonke nje isusiwe yabuyiselwa, kanye ezinye ubudala futhi ukhohliwe.
Uma uxhuma imemori khadi yakho kwikhompyutha, yempumelelo uhlelo lokutakula ifayela, ikhadi kufanele liboniswe drive.
Ngokulandelayo, scan imemori khadi bese ukuthola izithombe ususiwe. Le nqubo esheshayo kakhulu futhi kulula.
Uma ngaphandle izithombe kuvidiyo Ikhadi le-SD eqoshiwe bese nginika isusiwe, uphinde ukubuyisele ukuthola, lapho amafayela e-AVI, Mov, WAV, Mov,-MP3, MP4, i-MPEG format.
izithombe Ngakho elahlekile isusiwe noma ihlelwe namanye amafayela abezindaba kusukela kumemori khadi ingabuyiswa usebenzisa izithombe isofthiwe yokutakula. Iningi lolu hlobo software ine enembile isikhombimsebenzisi wizadi enophephela akubangi nobunzima ukusebenzisa ngisho ongenalwazi abasebenzisi computer. Isihluthulelo sokuphila yokutakula ophumelelayo ukusetshenziswa sakugcina isitoreji medium ngokubhala ukuba ulwazi olusha ngemuva kokususa idatha noma ukufometha.